आफ्नो बारीमा फलेको ‘किवी’ देखाउँदै धनकुटाका किसान !
आफनो बारीमा फलेको किवी देखाउँदै धनकुटा सहिदभूमी गाउँपालिका वडा नं.–६ थलेथलेका कृषक राजकुमार राई । रु १ लाख रुपैंयाको लागतमा उनले ३ रोपनीमा ब्यबसायीक खेती शुरु गरेका छन् । तस्वीर
अन्ततः पूर्णता पाऊने नै भयो धनकुटास्थित सिंधुवा बजारको ‘काउली प्रतिमा’ले ! (फोटोफिचर सहित)
धनकुटा खबर । धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका सिधुवा वजारमा निर्माणाधिन फुलकोपी (काउली)को प्रतिमाले अन्ततः पूर्णता पाउने भएको छ । वढीमात्रामा तरकारी उत्पादन हुने सिधुवा क्षेत्रको पहिचानको लागि तत्कालिन परेवादिन गाविसवाटै निर्माण
थाक्चाना बेसीको धान खेती !
धनकुटा नगरपालिका वडा नं.८ स्थित तमोर नदि किनारको थाक्चाना बेसीमा किसानले लगाएको धान खेती । धनकुटामा ९ हजार २ सय ४५ हेक्टरमा धान खेती हुने जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय धनकुटाको
धनकुटामा प्रभात फेरी
अन्तराष्टिय यूवा दिवस मूल समारोह समिति धनकुटाले आयोजना गरेको प्रभात फेरी । यूवा दिवसको अबसरमा यूवा समिति धनकुटाले साउन २५ देखि २७ सम्म बिभिन्न कार्यक्रम गरेको समितिका अध्यक्ष अर्जुन छाराले
सडक पेटिमा भोजन ग्रहण !
टुँडिखेलस्थित महाकाल मन्दिर नजिक सडक पेटिमा काठमाडौं नयाँ सडकका व्यापारी समुदायले उपलब्ध गराएको भोजन ग्रहण गर्दै बटुवाहरु । तस्वीर : नारायण न्यौपाने, रासस
३४ बर्ष पछि धनकुटामा औधोगिक ग्राम
धनकुटा खबर । धनकुटामा औधोगिक ग्रामको स्थापना भएको छ । राज्यले जमिन अधिग्रहण गरेको ३४ बर्ष पछि उक्त स्थानमा औधोगिक ग्राम स्थापना गरिएको हो । नेपाल सरकारको क्रमागत योजना अन्तर्गत
पार्क नै पार्कको शहर बन्दै धनकुटा बजार ! (फोटो फिचर सहित)
धनकुटा खबर । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएसंगै धनकुटा वजार क्षेत्र भित्रका सार्बजानीक स्थान अहिले सुन्दर र आकर्षक बनेका छन् । धनकुटा नगरपालिका सहित बवा कार्यलयले सार्बजानीक स्थानमा धमाधम पार्क निर्माण गर्न
धनकुटाको शहिदभूमीबाट हिले बजारमा बेच्न ल्याईएको लिची, गोटाको तीन रुपैयाँ ! (फोटो फिचर)
धनकुटाको शहिदभूमी गाउँपालिकाबाट हिले बजारमा यस समयको सिजनको फल मानिने लिची ल्याई बिक्रि गर्दै व्यापारी । यस्तो व्यापारमा पुरुष भन्दा महिला व्यापारी बढी हुने गर्दै छन् । उनिहरुले बसपार्क, साप्ताहीक
धनकुटा चौबिसेका यी १२ स्थान जसको ऐतिहासीक महत्व र सुन्दरता अतुलनिय छ – हेर्नुहोस् तस्वीर सहित
चौबिसे धनकुटा क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरु: लाफा गाउँ शहर उन्मूख यो मगर गाउँ राजारानी–छ नं. बुधबारे सडक खण्डको मुढेवासमा रहेको छ । वडा नं. २ मा रहेको यो बजारमा मगर जातिको
अपहरित विमान बिपी संग्रहालयमा !
नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई खर्च जुटाउन विसं २०३० मा अपहरण गरेको विमान बिपी संग्रहालयमा राखिँदै । विसं २०७० मा अर्घाखाँचीमा दुर्घटनाग्रस्त विमान काठमाडौँ ल्याई जीर्णोद्धार गरेर संग्रहालयमा राखिएको हो